Puntland oo heshiis ka gaarey dagaalka Alshabaab & beelaha ka daba qaylinaya ragga la xukumay.
July 12, 2021 Xuseen 6
Puntlandtimes (Galkacyo)-Wasiirada ammaanka maamulada Puntland iyo Galmudug oo kulan xasaasi ah ku yeeshay Galkacyo ayaa wada gaarey isfahan la xiriira dagaalka ka dhanka ah Alshabaab iyo beelaha habka qabyaaladaysan ugu doodaya ragga lagu helo kiisaska argagixisada.
Wasiirka ayaa waxa uu intaasi ku daray in labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ay horay ugu heshiiyeen la dagaalanka Al-Shabaab, sidoo kalena uu dhawaan bilaaban doono howlgal ay siwadajir ah u fulinayaan Ciidamada Puntland iyo Galmudug si ay u soo afjaraan dhaq dhsqaaqyada ay ka wadaan Gobolka Mudug.
Dhanka kalena, wasiirka amniga Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa dhankiisa sheegay in Puntland ay ku biireyso dagaalka ay Galmudug kula jirto Al-Shabaab, isla markaana marnaba aysan jiri doonin dad ay kala tashanayaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Cadowga waxaa wanaagsan in laga hortago oo lagula dagaallamo inta aanu gaarin halka maxasta iyo maalku kuu yaallaan. Sidaas oo ay tahayna, anigu ma qabo in askari reer Puntland ah uu ka dagaallamo 5km wax sii dhaafsiisan koonfurta Gaalkacyo.
Reer Galmudug ma haysato rag iyo hub la’aan waxaase haysta kalaqaybsanaan qabyaaladeed, is-dhagrid, iyo qaarkood oo Al-Shabaab hoosta ka taageersan. Siyaasiinta cusub ee Galmudug waa ka daacad inay Al-Shabaab la dagaallamaan laakiin shacabku waa dowdarro. Qolada keliya ee daacadda ka ahayd ladagaallanka Al-Shabaab waxay ahayd Suufiyaasha oo ay ku jirtay colaad caqiido xagga diinta ah.
Kumannaan lagu sheego ciidanka dowladda ayaa jooga degaannada Galmudug; waa maxay sababta ay ilaa hadda u hollinla’ yihiin inay weeraraan Xarardheere amase Ceelbuur?
Ugu dambeyn, ragga argagixisada ah ee toogashada loogu xukumay inay wax ku laayeen Galmudug — maa iyaga iyo kiiskoodaba lagu wareejiyo Galmudug si ay toogtaan? Mise laguma aamini karo oo musuq iyo inay siidaayaan ayaa laga baqayaa? Mise in Sacad iyo Murursade isku farasaaraan Xamar baa laga baqayaa?
Haa SOOMAALIDA ku maahmaahda… “BIYO INTAYSAN KU HAFIN AA LA ISKA MUUSA”. PUNTLAND waa in ay hormood u noqotaa la dagaalanka ALSHABAAB.. ALSHABAAB waa in laga safeeyaa dhamaan GALMUDUG iyo PUNTLAND. ALSHABAAB waa in loogu tagaa CEELBUUR iyo XARADHEERE. Waa in la burburiyaa meesha ay ka soo maamulayaan dagaalada.
MAJEERTEEN iyo HABAR GEDIR waa in ay iska kaashadaan wax kasta: AMINIGA, DHAQAALAHA, NABADA, iyo SIYAASADA.
PUNTLAND iyo GALMUDUG waa in ay meel iska dhigaan qabiilkii ay ku shaqaysan jidheen odayaal fajiistayaal ah, oo danta guud aan rabbin.
Aniga ila haboon in horta sacad gacan lagu siiyo wixii ay u baahan yihiin si deganadooda looga sifeeyo shiyaadiinta lkn aan halkaa la dhaafin inta Isfahan buuxa lala yeelanayo HG-ta kale.
Waa run HG cid ka Ciidan iyo hub badani ma jirto lkn kala firidsanan baa jirta. See baad u difaacee dad Markaa argigixiso laysid hadow ku dhahaya Puntland ayaa shicib ganacsato ah ayey qabiil nacayb u laaysay sida kuwa hada Xamar ka soo qaylinaya
I believe it’s rightly done for Puntland with fighting terrorism and its ideas in the regions of Somalia.
We appreciate how Puntlands aggression is deamination newly arrived buckets of Allshabaab within south mudug region.
Wadanku dowlad ayuu leeyahay, ciidan leh, Maxaa shabeelada hoose oo qura isugu geeye maxey xaradheero iyo ceel buur kala dagaalami waayeen? ciidanku Dowladda dhexe waa in uu ka dagaalamaa, Gobollada dhexe, mase dowllada kama tirsana? . arrintaas xaarmaajiaa ka dambeeya.